Home Wararka Maxaa ka soo baxay kulankii RW Rooble iyo Dowlad Goboleedyada?
Maxaa ka soo baxay kulankii RW Rooble iyo Dowlad Goboleedyada?
Kulan looga hadlayaay daahida qabsoomida doorashada Aqalka Sare ayuu Ra’iisul Wasaare Rooble uu habka fogaan aragga kula shiray Madaxda Golaha Wadatashiga Qaranka.
Sida uu sheegay afhayeenka xukuumada Maxamed Ibraahim Macalimuu kulankan uu ku booriyay Ra’iisul Wasaaraha Madaxda Madasha Qaran in ay sida ugu dhaqsaha badan u qabtaan doorashada aqalka sare, maadaama maanta ay ku ekeyd xilligii loo qabtay in la bilaabo doorashada Aqalka Senetka.
Kulankan ayuu sheegay afhayeenku in Madaxda ayaa isla qaateen in la dardar geliyo doorashada Golaha Aqalka Sare ee BFS. Dhinaca kale Golaha Wadatashiga Qaranku waxa ay madaxweynaha iyo bulshada Galmudug ku bogaadiyeen howlgallada lagula dagaallamayo argagixisada Alshabaab ee Ciidammada Qaranku ka wadaan Galmudug, iyagoo u muujiyay in ay taageero hiil iyo hooba leh la garab taagan yihiin.